Xogta Cilmi-baarista GMO - Cilmi-baarista GMO
U bood madaxa midig ee marinka
U bood cagta barta
Ku raadi kelmad-fureed
Raadinta Horumarineed ee Warbixinada Kale
La Soco Warbixinada Kale
Soo gudbi Maqaal
Taageerida Cilmi-baarista GMO
Sida Loo Raadiyo
Sahami sayniska GMOs iyo sunta cayayaanka la xidhiidha, iyo saamaynta ay ku leeyihiin caafimaadka, beeraha iyo deegaanka
Xogta cilmi-baarista GMO waxay ka kooban tahay daraasado iyo daabacaadyo joornaal ah oo diiwaangeliya khataraha ama suurtagalka ah iyo saameynta waxyeellada dhabta ah ee GMOs ("genetically modified," "genetically engineered," ama "bioengineered" noolaha) iyo cayayaanka la xidhiidha cayayaanka iyo beeraha. Xogta xogta waxaa loola jeedaa in ay u noqoto agab iyo qalab cilmi baaris oo loogu talagalay saynisyahannada, cilmi-baarayaasha, xirfadlayaasha caafimaadka, barayaasha, iyo dadweynaha guud. Falanqaynta qoto dheer ee daraasadaha muhiimka ah qaarkood ayaa la bixin doonaa. Midka ugu horreeya waa la heli karaa halkan.
Raadi joornaalada, maqaallada, cutubyada buugaagta iyo macluumaadka gelitaanka ee fur-furan.
Ka raadi warbixinno kale, sida warbixinnada NGO-yada iyo buugaagta, kuwaas oo aan buuxin shuruudaha kaydka muhiimka ah laakiin si isku mid ah u muhiim ah oo khuseeya.
Si aad u baadho xogtayada, geli shuruudaha raadinta mid ka mid ah baararka raadinta ee sare ama guji Ku raadi kelmad-fureed. Fadlan tixraac Sida Loo Raadiyo bogga macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan raadinta xogtayada.
Daraasado caan ah
Khuraafaadka GMO iyo Xaqiiqooyinka
Isbeddellada moorfooloji iyo kiimikaad ee jiirka labka ah oo lagu quudiyo galley hidde ahaan wax laga beddelay (Ajeeb YG)
Ku guuldaraysiga Wax-soo-saarka
Daraasadihii ugu dambeeyay
Xaqiiqooyinka Dhisidda: Sheekooyinka suufka Bt ee Hindiya.
Cadaadiska Oxidative ee glyphosate, AMPA iyo dheef-shiid kiimikaad ee pyrethroids iyo cayayaannada chlorpyrifos ee carruurta dugsiga hoose ee Qubrus.
Caddaynta sarakicidda chlordecone ee glyphosate ee Faransiiska Galbeedka Hindiya.
Saamaynta soo-gaadhista cuntada ee sunta cayayaanka lagu dilo ee dheef-shiid kiimikaadka microbiome ee saxarada ee mataanaha qaangaarka ah.
Saamaynta sunta ah ee Glyphosate ee habka dareemayaasha: Dib u eegis nidaamsan
Qulqulka Kala-guurka: Caqabadaha Ilaalinta Beerta-Beeraha ee Gallayda Landraces ee Gobolka Semi-Arid ee Brazil.
Calaamadaha biochemical ee xaaladda shaqada ee beerka ee serum dhiigga ee jiirka oo cunaya glyphosate-u-adkeysiga hidde ahaan soybean la beddelay iyo dhir-dhimista "Roundup".
Saamaynta glyphosate u adkaysta soy hidde ahaan wax laga beddelay iyo geedo-goosad wareeg ah oo ku saabsan heerka dheef-shiid kiimikaad ee nitrogen-ga beddelka jiirka.
Horumarinta dhalmada ka dib dhalmada jiirka dheddigga iyo tilmaamayaasha massometric ee xubnaha jiirka ee laba jiil iyadoo la adeegsanayo soybeans hidde ahaan la beddelay iyo Roundup.
Dheef-shiid kiimikaad ee xeryahooda nitrogen ee saddexda jiil ee jiirka ee hoos yimaada saamaynta glyphosate-u-adkeysiga hidde ahaan soy la beddelay iyo Roundup herbicide.
Warbixinadii ugu dambeeyay ee NGO-yada
Is-afgaradka Cunnooyinka GM waa in lagu saleeyaa dib-u-eegis habaysan
Cilmi-baadhisyo badan ayaa tilmaamaya Cunnada GM ee caanka ah oo aan ammaan u ahayn sida qaybta caadiga ah
Inta badan xirfadlayaasha caafimaadka iyo ardayda caafimaadka waxay aaminsan yihiin in cuntooyinka GM ay yihiin kuwo aan badbaado lahayn
Inta badan kooxaha caafimaadka waxay su'aalaan badqabka cuntooyinka GM
Oggolaanshaha xad dhaafka ah ee Badbaadada Cunnada Hidde ahaan wax laga beddelay
Xog-ururintan waxa ku shaqeeya GMO Free USA, 501(c) 3 danta guud ee aan faa'iido doonka ahayn, oo taageero ka helaysa GMOScience iyo GMWatch. Iyadoo aan wax lacag ah laga bixin isticmaalka xogtan, deeqo waa la mahadiyay si ay u daboosho kharashka dayactirka socda iyo cusboonaysiinta. Deequhu waa cashuur laga jarayo ilaa xadka sharcigu ogolyahay.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 · Cilmi-baarista GMO Dhammaan xuquuq dhowran
Ha iibiin macluumaadkeyga shaqsiyadeed .